Guqula iswekile, yintoni kwaye yenzelwe ntoni? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
Nabani na oye wafunda ileyibhile yokutya kwaye waqaphela ukuba igama liguqula iswekile usenokuba unomdla malunga nesithako. Yiswiti esetyenziselwa iilekese ezininzi kunye neziselo, ngenxa yokukwazi kwayo ukugcina ukufuma kunye nokugcina ukuthungwa kugudile.
1 Yintoni invert sugar?
2 Ukufumana phi ukuguqula iswekile
3 Amanye amagama wokuguqula iswekile
4 Umngcipheko wokusetyenziswa gwenxa kweswekile
Yintoni invert sugar?
Nangona ukuguqula iswekile kunokuba negama eliqaqambileyo, isondlo ngokufanayo neswekile yetafile okanye ezinye izinto zokuthambisa. Ngapha koko, ifunyenwe kwitafile yeswekile, eyaziwa ngokwesayensi njenge-sucrose.
I-Sucrose iyi-disaccharide, eyenziwe ziimolekyuli ezimbini zeswekile ezahlukeneyo ezidityaniswe kunye, kule meko, iswekile kunye nefructose. Ke, i-invert iveliswa ngokwaphula iibhondi phakathi kweswekile kunye nefructose.
Igama eliguqula iswekile livela kwindlela ukukhanya okuqaqanjisiweyo okubonakalisa ngayo iswekile. Xa ukukhanya okukhanyayo kukhanya kwi-sucrose, ukukhanya kubonakaliswa kwikona ethile. Nangona kunjalo, xa kukhanya ngeswekile yokuguqula, ukukhanya kujikeleza kwelinye icala.
Ukufumana phi ukuguqula iswekile
Nangona ukuguqula iswekile kunokufumaneka kukutya okuninzi, kudityaniswa ngokubanzi kwezi ntlobo zilandelayo zeemveliso:
Isiraphu (yeziselo, ikofu, njl.
Isoda (kunye nezinye iziselo ezineswekile)
Iziphuzo zeziqhamo ezingekho kwi-100% yejusi yeziqhamo.
Amanye amagama wokuguqula iswekile
Guqula isiraphu yeswekile
Isiraphu yemephu eguqulweyo
Umngcipheko wokusetyenziswa gwenxa kweswekile
Zonke iiswekile, nokuba zibhalwe njani, zinempembelelo efanayo emzimbeni ngokunyusa amanqanaba eswekile yegazi, zibangela ukuveliswa kwe-insulin. Umzimba ukhupha i-insulin yokuhambisa iswekile yegazi kwiiseli kwaye uyisebenzisele amandla.
Ngokubanzi, le nkqubo ilula, kodwa xa usebenzisa kakhulu iswekile, amandla okugcina amanqatha emzimbeni ayonyuka. Ke ngoko, ukwanda kwemveliso ye-insulin kungakhokelela ekuchaseni le nto, inyanzele umzimba ukuba wenze ngakumbi le hormone, ethi igcine amanqatha amaninzi omzimba.
Ixesha elingaphezulu, ukunganyangeki kwi-insulin kunye nokufumana ubunzima bomzimba emva kokutya iswekile engaphezulu kunokuba kufanelekile kunokukhokelela kuphuhliso lwesifo seswekile, ukunyusa umngcipheko we-glaucoma, ukusilela kwezintso, kwaye kungoyena nobangela wokuhlaselwa sisifo sentliziyo.
Ke ngoko, ukusetyenziswa kakhulu kweswekile, ngakumbi okucokisekileyo, kungakhokelela kutshintsho kwimetabolism yomzimba kunye nokudumba, okunokubangela inani lezifo ezinganyangekiyo, ezinje ngecholesterol, uxinzelelo lwegazi, isifo sesibindi esinamafutha, isifo se-metabolic kunye nentliziyo.